Ihowuliseyili i-2019-NCOV i-Antigen Test Kit abavelisi kunye nomthengisi | Immuno
Isetyenziselwe Uvavanyo lwe-COVID 19 lwe-Antigen
Ukupakisha Iikiti ezingama-20 zovavanyo / ibhokisi yokupakishaIibhokisi ezingama-50 / iCartonUbungakanani beCarton: 64 * 44 * 39cm
I-IMMUNOBIO 2019 Coronavirus Antigen Test Kit (Colloidal Gold Method) sisigaba esomeleleyo sovavanyo lwe-immunochromatographic yesimo esikhawulezayo, esifanelekileyo se-COVID 19 antigen esuka kwiCoronavirus kwimpumlo yomntu / yeSaliva swab.
I-Immuno 2019 Coronavirus Antigen Test Kit isetyenziselwa uvavanyo lokuqala kwaye naziphi na iziphumo zovavanyo ziya kugwetywa ngokufanelekileyo ngokudibeneyo novavanyo lweklinikhi yasesibhedlele
I-IMMUNOBIO 2019 yeCoronavirus Antigen Test Kit isebenzisa i-Nasal swab okanye iSaliva swab njenge-specimen. Zombini ii-Specimen ezisetyenziselwa uvavanyo lwe-Antigen ngovakalelo oluphezulu kakhulu kunye nokucaciswa
A. IMMUNOBIO 2019 Coronavirus Antigen Test Kit ingabonisa ukuphinda uvavanye kwisithuba semizuzu eli-10-15
B. Ngaphezulu kwe-95% yobuntununtunu kunye nokucaciswa
C. ezilula kwaye ngokukhawuleza, akukho reuqire kwakhona kovavanyo lwezixhobo, nokuba ungavavanya ekhaya
D. Esebenzayo kuzo zombini iimpumlo zeempumlo kunye namathe
Iimpawu ezincinci zanele, zimbalwa iimpumlo zeempumlo okanye zomqala
1. Ngesiqinisekiso se-CE / ISO13485
2. Ibhaliswe eJamani Icandelo loMphathiswa Wezempilo
3. Uluhlu oluMhlophe lwaseTshayina
1. I-OEM / i-ODM ye-2019-NCOV Antigen Test kit iyafumaneka
2.Nikezela ngeendlela ezahlukeneyo zovavanyo lwe-2019-NCOV, IGG / IGM TEST, uvavanyo lweAngtine, uvavanyo lweAntibody
3. Ukufumana ingxelo ngokukhawuleza nangexesha, nangaliphi na ixesha naphi na kwinkonzo yabathengi.
4. Ukubonelela ngenkxaso yezobugcisa kunye noqeqesho lwemveliso yeekhithi zovavanyo zeConornavirus zango-2019
5. Ukubonelela ngephepha elingapheliyo kwi-2019-NCOV test kit
Umbuzo woku-1: Ndingazifumana iisampulu zekhithi yovavanyo ze-COVID 19 ngaphambi komdlalo wokudlala?
A: Ewe, sinika ikiti yovavanyo lwe-COVID 19
Umbuzo 2: Bungakanani ubungakanani be-oda encinci ye-testkit ka-2019-ncov?
A: Akukho mfuneko ye-MOQ, kodwa siya kuphakamisa owona myalelo ungcono ngokweendleko ze-freigtht
Umbuzo 3: Sesiphi isiqinisekiso onaso Uvavanyo lwe-2019-ncov olukhawulezayo ikhithi?
A: CE / ISO13485 / Uluhlu oluMhlophe lwaseTshayina
Umbuzo 4: Uphi umzi-mveliso wakho? Ngaba ndwendwela umzi-mveliso wakho?
A: SiseHangzhou, Alibaba ikwakhona, isiqingatha seyure ukusuka eShanghai ngololiwe ohamba ngesantya esiphezulu. Wamkelekile naninina xa usindwendwela ..
Umbuzo 5: Ndingahlawula njani?
A: Ungahlawula i-USD, i-EURO kunye ne-RMB nge-T / T, nge-PayPal okanye nge-Western Union.
Umbuzo 6: Luphi urhwebo lwakho oluphambili?
A: iYurophu, iSouthafrica kunye neChines Mainland
Egqithileyo Uvavanyo lwe-2019 yenoveli coronavirus Antigen
Okulandelayo: I-2019-ncov ngokukhawuleza ye-antigen test strip
Uvavanyo lwe-2019-ncov olukhawulezayo
Ikhithi yovavanyo ye-2019-ncov
inoveli coronavirus 2019-ncov kabini
Ikhithi yovavanyo lwe-Antigen ekhawulezayo